सुखी नगरवासी र पर्यटकीय नगर निर्माण गर्दै छौं – Rajdhani Daily
सुखी नगरवासी र पर्यटकीय नगर निर्माण गर्दै छौं
मेयर, बागलुङ नगरपालिका
प्रखर वक्ता, विकासवादी नेता तथा जनसम्पर्कमा अब्बल छवि बनाएका जनकराज पौडेलले बागलुङ नगरपालिकाको मेयरको
जिम्मेवारी सम्हालेको दुई वर्ष भएको छ । लामो समय जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि जनताका आशा र अपेक्षा धेरै छन् । ती विषय पूरा गर्न नगरपालिकाले गर्दै आएका कार्य, भावी योजनाबारे केन्द्रित रहेर राजधानीकर्मी नवीन शिशिरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
जिम्मेवारीको दुई वर्षलाई कसरी मूल्याकंन गर्नुभएको छ ?
नगर प्रमुखका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेपछि म आफ्नो कामबाट आधारभूत रूपमा सन्तुष्टि नै छु । यसबीचमा नगरपालिकाबाट जे जति काम भएको छ, घोषणापत्रअनुसार नै काम भएको छ । प्राथमिकताको आधारमा काम अघि बढाएका छौं, त्यसमा सन्तुष्टि नै छु । त्यसका साथमा आमनागरिकको सेवाप्रवाहको विषयमा केही गुनासाहरू छन् । यसलाई अझै सुधार गरेर जानुपर्ने अवस्था छ ।
नागरिक तहबाट कस्ता खालका गुनासा आएका छन् ?
नगरपालिकाले कार्य जिम्मेवारीअनुसार प्रदान गर्नुपर्ने, सम्पादन गर्नुपर्ने जुन सेवाहरू हुन् त्यसमा अझै सरलता भइसकेको छैन । कर्मचारीमा अझै पनि पुरानो मानसिकता छ । सेवाग्राहीलाई सम्मान गर्ने स्वभावको अभाव छ । आमनागरिकसँग बुझ्दा नगरपालिकाबाट प्रदान गर्ने सेवामा केही सुझाव र गुनासा आएका छन् । त्यसलाई सुधार गर्ने प्राथमिकतामा राखेको छु । सेवाप्रवाहलाई प्रविधिमैत्री, काम छिटोछरितो बनाउनुपर्ने र जवाफदेही र जिम्मेवारी हुनुपर्ने सुझाव छ । कर्मचारीतन्त्रको अवसरमा हानाथाप गर्ने जवाफदेही र जिम्मेवारीलाई नजरअन्दाज गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्न सके सेवाप्रवाहलाई अझै चुस्तदुरुस्त बनाउन सकिन्छ । सेवासुविधा जनताको घरदैलोमा लिएर जान सकिन्छ । यसतर्फ मेरो पूरा ध्यान केन्द्रित छ ।
केही वडामा वडाध्यक्ष नबस्ने, बजार केन्द्रित भएको गुनासो छ नि ?
आमरूपमा वडा कार्यालय वडाबाटै नै सञ्चालित छन् । नागरिकहरूको कहिलेकाहीँ बसेकै ठाउँबाट सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । जहाँ भेट्यो त्यहाँ काम गर्नैपर्ने जनप्रतिनिधिको बाध्यता हो । नागरिकको काम त उनीहरूको आवश्यकताअनुसार नै गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । अन्यथा सम्पर्क कार्यालय सदरमुकामबाट सेवा प्रदान गर्ने काम गर्नुहुन्न ।
निर्वाचनको समयमा गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा भए त ?
वडाका मुख्य सडकमा बाह्रै महिना सवारी चलाउने एउटा प्रतिबद्धता थियो । हिउँदको समयबाहेक अन्य समयमा वडावडामा पुग्ने सडकमा सवारी चल्न नसक्ने अवस्था थियो । अहिले हामी ती सडकको अवस्था सुधार गर्दै बस सेवा समेत सञ्चालनको तयारीमा छौं । अहिले बलेवा, भकुन्डे रायडाँडामा नगर बस सञ्चालन भइसकेको छ भने सिगाना बौडाइ चौरमा बस सञ्चालनका निम्ति बाटो विस्तार र सुधारको काम अघि बढेको छ । यसका साथमा प्रत्येक वडामा कालोपत्रे सडक पु¥याउँछौं भनेर प्रतिबद्धता गरेका थियौं, यो वर्ष थप पाँच वडा १, २, ३, ४ र ६ नम्बर वडामा कालोपत्रे बाटो छ । यो वर्ष हामीले ५ र ७, १३ र १४ वडामा कालोपत्रे सडक पु¥याउँछौं ।
खानेपानीको समस्या धेरै ठाउँमा छन् । तर, पनि आधारभूत खानेपानी सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने, एक ग्यालेन पानीका लागि घण्टांै कुर्नुपर्ने स्रोत र व्यवस्थापनको अभाव, खानेपानीको अभावले आक्रान्त बनेकोे कुडुले, लहरेपीपल लामाचौर, पैंयुपाटा, भकुन्डे क्षेत्रमा यो वर्ष हामीले खानेपानी पु¥याएका छौं । बजेट व्यवस्थापन गरेर काम गरेका छौं । त्यसका साथै ३, ७ र ९ मा प्रदेश सरकारको सहकार्यमा १० करोडको हाराहारीमा हामीले एक घर एक धाराको खानेपानी व्यवस्थापन गर्ने दिशामा अगाडि बढेका छौं । बजार क्षेत्र, कुँडुले क्षेत्रमा जुन पानीको समस्या थियो त्यसलाई समाधान गर्न कैलाम पोखरी लिफ्ट खानेपानी र कालीगण्डकीको पानी लाहरे पीपल कँुडुले क्षेत्रको समस्या सामाधान गर्ने काम सुरु भएको छ । दशकांैदेखिको खानेपानीमा जुन राजनीति थियो, त्यो अब सकिन्छ । साथमा शिक्षातर्फ सामुदायिक विद्यालयतर्फ आमनागरिकलाई आकर्षित गरेको छौं । व्यवस्थापनलाई सुधार गरेका छौं । झन्डै ६ दर्जन शिक्षक छनोट खुला तरिकाले गरेका छौं । विद्यालय प्रशासनमा सुधार आएको छ यसले गुणस्तरमा सहयोग गर्छ ।
जनप्रतिनिधि अर्थोपार्जनमा लिप्त भए भन्ने आरोप छ नि ?
कानुनले दिएको न्यूनतम सुविधा लिएर हामी चलेका छौं । हाम्रो जीवनशैली पनि तपाईंहरूले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ । कानुनबमोजिम पाउने सुविधा पनि उपलब्ध गराउन सकेका छैनौं, लिएका पनि छैनौं । कानुनले दिएका न्यूनतम सुविधाबाट हामी जेनतेन चलेका छौं । तपार्इं परिकल्पना गर्नुहोस्, हिजो गाविस हुँदा एउटा खरदार÷सुब्बा राज्यले प्रदान गरेको मोटर साइकल चढ्थे तर अहिले हामीले जनप्रतिनिधिलाई एउटा हलुका सवारी पनि उपलब्ध गराउन सकेका छैनौं । यो आरोप गलत हो । जनताको काममा जतिबेला पनि तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने जनप्रतिनिधिले सामान्य सवारीको प्रयोग गर्ने विषय सामान्य हो । हाम्रो खानपिन, आहारविहार सबैले देख्न सक्नुहुन्छ, सादा जीवन उच्च विचारका साथ जनताको सेवामा खटिएका छौं । जनताको अपेक्षा पनि हाम्रा जनप्रतिनिधि विलासी नहुन्, भोगी नहुन् भन्ने अपेक्षा त्यसलाई मर्न दिन्नांै । सत्ता पाएपछि तडकभडक गर्ने प्रवृत्तिप्रति नागरिकका खबरदारी छ, त्यो राम्रो हो । राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुँदा हल्काफुल्का टीकाटिप्पणी गर्ने, सामाजिक सञ्जाललाई दुरुपयोग गरी जे पायो, त्यही लेख्ने सानो झुन्ड जनप्रतिनिधिलाई बदनामी गराउन केन्द्रित छ । हामी सामान्य नागरिकसरह नै जिउने हो ।
गाउँमा सिंहदरबार आयो भन्छन् सिंह मात्र आयो कि दरबार पनि आएको छ ?
संविधानअनुसार जनताको घरदैलोको सरकार स्थानीय सरकार नै हो । त्यही संविधानले पाएको अधिकारलाई व्याख्या गर्ने सिलसिलामा सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा आयो भनेर प्रचार ग¥यांै, त्यहीबमोजिम प्रशिक्षण गरियो तर समस्या के छ भने अहिले पनि केन्द्रीकृत सोचाइ, व्यवहार छ, बजेट विनियोजन संघीताको मर्मअनुसार छैन, ससर्त अनुदानका काम आउँछन् । संविधानले जुन अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ, त्यसले पनि बलियो खुट्टा टेकेको छैन । सेवाप्रवाह गर्ने विषयमा वित्तीय व्यवस्थापन पनि हुनुपर्छ अहिले पनि वित्त आयोगले वैज्ञानिक ढंगले वित्त व्यवस्थापन गरेको छैन । कर व्यवस्थापनको अलमल अझै सकिएको छैन । केन्द्र र प्रदेशले बनाउनुपर्ने कानुन निर्माण नहुँदा हामीलाई कानुन बनाउन समस्या भएको छ । समस्याहरू क्रमशः हट्दो छ तर पनि केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्नुपर्ने अधिकार र सहयोग आफ्नो मुठीभित्र राख्ने, आफ्नो मुठी फकाउन नचाहने प्रवृत्ति छ । वित्तीय संघीयताको पहिलो वर्ष भएको हुँदा संघीयता पूर्णरूपमा लागू भएको छैन । सिद्धान्त र कानुनले सिंहदरबार गाउँमा आएपछि व्यवहार त सिंहदरबार आएको छैन । सेवा केन्द्र, विज्ञ केन्द्रको नाममा एक जिल्लाबाट अर्का जिल्लामा धानुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । संघीयताको मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्न सकेका छैनौं । काम बढी जनशक्ति कम स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन वैज्ञानिक भएको छैन ।
स्थानीय सरकारले बनाउने कानुनको विषयमा के भएको छ ?
हामीले झन्डै तीन दर्जन जति ऐन कानुन निर्माण गर्नुका साथै कार्य विधि पास गरेका छौं । स्थानीय राजपत्र जारी गरेका छौं । प्रदेश र केन्द्रको कानुनसँग नबाझिने प्रावधान हुँदा सबै कानुन निर्माण गर्न सकेका छैनौं । संघीय सरकारबाट कानुनी निर्माण तथा संविधानले दिएको अधिकार पनि पाएका छैनौं । संघीय सरकार पनि आफ्नो सीमाभित्र रहनुपथ्र्याे, हुन त हामीले विषय उठाउँदा हामी संघीयता विरोधी होइन भन्ने जवाफ पाउँछौं तर व्यवहारमा लागू भएन । स्रोतसाधान र जनशक्ति बाँडफाडमा केन्द्रीय सरकार उदार हुन सकेन । जनशक्ति नदिने, कानुन पनि नदिने, स्रोतसाधन पनि नदिने चारैतिरबाट हातखुट्टा बाँधेर दौडन सकिँदैन । तर, पनि निराशावादी छैनौं । हामी एकआपसका प्रतिस्पर्धी नभएर सहयोगी हौं ।
सिटी हल र रिङरोडको काम के हुँदै छ ?
नेपालकै लामो पुल शिलान्यास, बसपार्क निर्माणको कामले गति लिएको छ । ठूला खानेपानी आयोजनाको काम पनि सुरु भए । माझीवस्ती व्यवस्थापन गरियो, बांगेचौर खेलमैदानको डीपीआर तयार भयो, ढलनिकासजस्ता महŒवपूर्ण काम सुरु भएका छन् । सिटी हल निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन नहुँदा केन्द्रीय सरकारको ध्यानकर्षण गरेका छौं । मन्त्रालयस्तरबाट निकास नभए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै पुगेका छौं । आशावादी छौं, केही समयभित्र नै अगाडि बढ्छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनको काममा पनि लागेका छौं । कबर्डहल निर्माण गर्दैछौं । चियाखेती, खानी उत्खनन्को काम भइरहेको छ । कृषि क्याम्पस सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं । खरको छानो हटाउने काम तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ । यो वर्ष नगरपालिका आक्रामक रूपमा जनताको आवश्यकता पूरा गर्न लागेको छ ।
तपाईंको कार्य अवधिमा कस्तो नगरपालिका बन्छ ?
ढल पूर्ण रूपमा व्यवस्थित, सिटीहल निर्माण, सुविधा सम्पन्न खेल मैदान, वन्यजन्तु संरक्षण केन्द्र, नयाँ पर्यटकीय केन्द्रको निर्माणको काम सम्पन्न हुनेछन् । विकास निर्माणको काम उच्च तहमा पुग्नेछ । आमनागरिकले संघीयता, स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधि हुनुको महŒव र आवश्यकता बुझ्ने गरी काम हुनेछ । काम, अवसर प्राप्त गरेका नगरवासी, खुसी जनता भएको नगरपालिका निर्माण हुनेछ । आमनगरवासीको जीवनस्तर सुधार भएको नगर बन्नेछ । विकसित नगरपालिकको दाँजोमा पुग्नेछ । पर्यटक विकासको लागि पद मार्ग निर्माण हुनेछ । होमस्टे व्यवस्थित हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू आउने क्रम बढनेछ । पर्यटनको हब बनाउनेछौं ।
Tags: नगर निर्माण गर्दै छौं